I-Parrot iveza i-minidrones zayo ezintsha, i-Swing kunye ne-Mambo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Robotics, Te knoloji
Namhlanje ii-minidrones ezintsha zeParrot ezaziwayo zenziwa ngokusemthethweni. Ezi minidrones zinamagama aneentsingiselo ezininzi, I-Swing kunye ne-Mambo kulula ukuyiphatha kangangokuba ijongeka ngathi ngumdanisi ngengqondo yokoqobo yelizwi. Ezi minidrones zimbini zintsha zineempawu ezenza ukuba zikhetheke kwimarike, ngexabiso eliqinisekileyo lokuthenga imveliso yohlobo lweParrot. U-Swing no-Mambo bagxile kwinto eyahlukileyo kwaye ngaxeshanye nabaphulaphuli abafanayo, ngenjongo yokubonelela ngolonwabo olungenakuthelekiswa nanto, iidroni zabo bonke abasebenzisi, ingcali kunye nomqali, ungaphoswa ziimpawu zezi mveliso zintsha zeParrot.
Oku kusasazwa ngokutsha kwee-minidron zokuzonwabisa ezivela kwi-Parrot kuza kuhambelana nokusungulwa kwezinye iibhendi ezimbini ezibalulekileyo; Eyokuqala sisicelo sezixhobo zeselfowuni eziza kwaziwa njenge IFreeFlight Mini; Kwelinye icala sine IParrot Flypad, indawo entsha ekude yokulawula ezi zinto zincinci zeParrot, ezinekhulu leepesenti zomdlalo weqonga, okt, kubonakala ngathi yenzelwe ukudlala ikhonsoli endaweni yokuqhuba idrone, yile nto yenza ukuba amava okuvavanya iParrot abe ngumdlalo wonke , kubo bonke abaphulaphuli.
1 I-Parrot Swing: Isebenza ngeendlela ezahlukeneyo, kubaqalayo kunye namava
2 IParrot Mambo: Dubula, ubambe kwaye ubhabhe nale minidron intle
3 IParrot Flypad, umlawuli weconsole kwiminidrones yethu
4 Parrot Freeflight Mini, isicelo sokutshatisa
I-Parrot Swing: Isebenza ngeendlela ezahlukeneyo, kubaqalayo kunye namava
Le drone ibaluleke kakhulu, i-minidron yokuqala yokuhamba kunye nomhlaba ngokuthe nkqo, njengayo nayiphi na i-quadcopter, kodwa inakho ukubhabha ngokuthe tye njengendiza. Ilungelo elilodwa lomenzi weParrot yenza imveliso enomdla kakhulu. Nje ukuba sisebenze imo "yenqwelo moya" iParrot Swing iyakwazi ukufikelela kwisantya ukuya kuthi ga kwi-30 km / h, isantya esimangazayo ukuba sijonga ukuba le drone ithathwa njengeyona nto yokudlala, enyanisweni, siza kuyifumana kwiivenkile ezininzi zokudlala.
Ezi mpawu ezenza ukuba zikhetheke kangaka ziya kusivumela ukuba senze uthotho lweziqhu ngesantya esiphezulu, apho ukukhanya kwayo (kuphela i-73g) kunento yokwenza nayo. Esi sixhobo sine-pilot esizenzekelayo sibulela kubenzi bayo (i-accelerometer kunye ne-gyroscope) kunye nekhamera yayo. Okokugqibela, ukuba senza i "quadcopter» imo kule drone eguqukayo, inzwa ye-ultrasound iya kuhlalutya ukuphakama kwendiza kwaye iyibeke esweni enkosi emsebenzini wakhe ngesandla kunye noxinzelelo lwenzwa. Oku kuyakusisindisa enkathazweni nge-drone, kwaye kuya kusivumela ukuba siqwalasele ukuphakama okuphezulu apho sifuna ukubhabha i-drone, kwimeko apho senza khona iindlela zokubhabha ngaphakathi.
Le drone ine-autonomy malunga I-8 yemizuzu yokubhabha, kwaye ibhetri yakho iyakubiza malunga nemizuzu engama-25. Sele ithengiswa kwiindawo ezikhethekileyo kunye nevenkile esemthethweni ye Iparrot nge-139 yeerandi. Iya kubandakanya iParrot Flypad.
IParrot Mambo: Dubula, ubambe kwaye ubhabhe nale minidron intle
Le minidron enokubonakala kweMachiavellian ingasizisela intyatyambo okanye isidubule ngolunya, konke kuxhomekeke ekusebenziseni esifuna ukukunika kona. Le yidrone yokuqala yokuqala enezixhobo zentengiso. Ezi zizincedisi ezibonelelwa ngokuthenga:
Cannon: I-trigger enoluhlu oluya kwi-2m, kunye nemagazini ukuya kwi-6 iibhola ze-PVC.
UkubambaInkqubo yezibopho ezivumela ukuxhasa izinto ukuya kuthi ga kwi-4 gram.
Kwelinye icala, le Parrot Mambo inika ithuba loku thenga izibane ezimbini ze-LED ezimhlophe. Ngesicelo esiphathwayo esinokuthi sigxile, sithumele imiqondiso kwaye sihlengahlengise uluhlu, kwaye amaxabiso ayo aya kuba yi- € 15.
Kodwa asihlali apha, iParrot Mambo I-Swing kunye ne-Mambo kulula ukuyiphatha kangangokuba ijongeka ngathi ngumdanisi ngengqondo yokoqobo yelizwi., ikuvumela ukuba wenze zonke iintlobo zemingxunya kwaye unozinzo olukhethekileyo lokubamba inqwelomoya kwi-accelerometer kunye ne-gyroscope. NjengeParrot Swing, inekhamera ekuvumela ukuba uthathe imifanekiso kwaye uyigcine kwimemori ye-1GB eneminidron. Ii-Ultrasound kunye noxinzelelo lweemvakalelo zikhona kule nikezelo, zisenza ukubhabha kamnandi kwaye sikhuselekile.
IParrot Mambo iya kuba nokuzimela ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-9 kwaye iya kuhlawulisa malunga nesiqingatha seyure. Ixabiso layo lokuthengisa 119 € (Kunye nezixhobo zombini zibandakanyiwe) kwaye zingathengwa kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso nakwiivenkile zewebhu zeParrot.
IParrot Flypad, umlawuli weconsole kwiminidrones yethu
El IParrot Flypad es umyalelo owenzelwe ukuba sibe nexesha elihle ngokwenene sidlala nee-minidrones zethu. Ikwanayo nenguqulo I-Bluetooth Low Energy I-Parrot, enoluhlu olukufikelela kwiimitha ezingama-60, ke ziyahambelana nayo Umoya ojikelezayo kunye nesigcawu esijikelezayo (iimodeli zangaphambili). Olu lawulo nge-aesthetics ekhethekileyo inezinto ezimbini zokuzonwabisa kunye noqwalaselo lwamaqhosha angaphambili amahlanu, kunye nezinto ezine ezingasemva. Intlawulo nganye (iiyure ezi-2) iya kukunika ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-6 zokuzimela. Ubunzima obupheleleyo be IParrot Flypad yi-295, kwaye iya kusivumela ukuba sibandakanye i-smartphone yethu ukuze sisebenzise onke amanqaku e IParrot SimahlaFlight Mini, isicelo esitsha esisibonisa apha ngezantsi. Ingathengwa ngokwahlukeneyo nge- $ 39.
Parrot Freeflight Mini, isicelo sokutshatisa
Isicelo esitsha esivezwa yiParrot siyakusivumela ukuba silawule phantse yonke imiba yee-minidrones zethu, kunye nokunikezela iintshukumo ezithile kumaqhosha akude IParrot Flypad. Inayo ujongano olulula, sikwazile ukuvavanya ukusetyenziswa kwaye kubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, sinokusebenzisa i- IParrot Flypad ngaphandle kwayo, nangona iyakuba lulongezo esingayi kufuna ukuchitha, ukusukela Isikhwenene esiyiFlashflight Mini Ngoku iyafumaneka kwiivenkile eziphambili zesicelo se-iOS kunye nezixhobo ze-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Robotics » I-Parrot iveza i-minidrones zayo ezintsha, u-Swing no-Mambo, sikubonisa zona
Ngoku ungathenga iPokémon GO Plus elindelekileyo eSpain